Kismaayo News » Beled Xaawo, laga qax, lagu noqay
Beled Xaawo, laga qax, lagu noqay
Kn:Magaalada Beled Xaawo ama Buulo Xaawo hadba kaad u taqaano waxaa maanta saacado ka ariminayay cutubyo ka tirsan Alshabaab, kuwaasi oo si lama filaan ah u raacdeeyay ciidamadii Ahlu sunna iyo kuwa Dawladda oo gacanta ku hayay magaalada.
Tola’ay, yaa maali jiray kadib, ciidamada huwanta ayaa weerar celis dib ugu soo maqiiqay magaalada waxayna dabada ka galeen ciidamadii Alshabaab ee magaalada qabsaday ayagoo waliba kulaylka milicda ku eryay in la mid ah intii ayaga markii hore lagu cagaajiyay.
Shacabkii ku dhaqnaa magaalada ayaa qaar kamid ah ay gadiga kale u talaabeen soohdinta u dhaxaysa Mandheera iyo Beled Xaawo oo aan masaafo sidaasi ah kala durugsanayn.
Walow ay jiraan khasaare dad iyo maalba leh oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay ayaa hadana waxay labada dhinac kala sheeganayaan inay guulo kala joogaan oo midba kan kale birta ka aslay, waxaase xaqiiq biyo kama dhibcaan ah in magaalada ay hadda ku suganyihiin ciidamada huwanta ee Ahlu Sunna iyo kuwa Dawladda. Arintu waxay ku idlaatay Jugjug meeshaada joog, 10 dhimasho ah iyo labaatameeyo dhaawac ah oo isugu jira dhanacyadii dagaalamay.
Beled Xaawo oo ah xarunta degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa dhacda xariiqa u dhexeeya labada dal, waxaana degta kale ama gadiga kale ka soo saaran magaalada Mandheera oo inta badan ay ku xirantahay nolosha dadka ku dhaqan degmada Beled Xaawo, xagga ganacsiga, caafimaadka iyo waxbarashada.
Dagaalka ay saacadaha kooban kula wareegeen Alshabaab magaalada Beled Xaawo ayaa lagu macneeyay inay ahayd qaniinyo ay isaga fujinayeen ama isaga nafisinayeen duulaanka ay ciidamada huwanta ugu sii siqayaan magaalada muhiimka ah ee Baardheere.